China Silicone Baby Cup Training Sippy Infant Eco Friendly l Melikey စက်ရုံနှင့်ရောင်းချသူများ | Melikey
ဆီလီကွန်ခွက်ကလေး အားနူးညံ့ပျော့ပြောင်းသောအစားအစာအဆင့်ဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကလေးငယ်များအတွက်လုံခြုံသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် tableware for baby feeding
Two-in-one snack & water cup: အစားထိုးနိုင်သောအဖုံး ၂ ခုပါ ၀ င်သည်၊ ကောက်ရိုးခွက်အဖြစ်သို့ကလေးသရေစာအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ အဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ၊ ၎င်းသည်ဖွင့်ထားသောသောက်ခွက်လည်းဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးကိုလေနုအေးတိုက်ပြီးသောက်ပါစေ။
Fall-proof baby cup: ပျော့ပျောင်းပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျလျှင်ကျိုးပျက်သွားမည် သင့်ကလေးငယ်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ လွတ်လပ်စွာစားသောက်ရန်သင်ယူရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
တာရှည်ခံ duckbill ခွက်: လက်ကိုင်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်၊ လက်ငယ်များကိုဆုပ်ကိုင်ရန်၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးပြီးပုလင်းမှခွက်သို့လွယ်ကူသောအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအားပေးသည်။ ပမာဏ ၉ အောင်စ/၂၅၀ မီလီလီတာ ၆ လကျော်ကလေးငယ်များအတွက်သင့်တော်သည်
တစ်ပိုင်း၊ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းကိုပန်းကန်ဆေးစက်တွင်သန့်စင်နိုင်သည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအစားအစာအဆင့်စီလီကွန်၊ bisphenol A, PVC နှင့် phthalates တို့မပါဘဲ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အဖုံးပါသော Silicone Baby Cup
MOQ: အရောင် ၁ ဝဝစီ
ယူနစ်စျေးနှုန်း - USD 2.5 ~ 2.8
Silicone Baby Toddler Sippy လေ့ကျင့်ရေးခွက် BPA Free ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
The size of ချစ်သူသည်ကလေးငယ်များ၊ ကလေးပါးစပ်နှင့်လက်များအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ ကောက်ရိုးပါသောဆီလီကွန်ခွက်ကလေးသည် 250ml ပါ ၀ င်သောပျော့ပျောင်းသောနှာခေါင်းပေါက်ပါ ၀ င်သောကလေးများအတွက်သင့်တော်သည်။ ကလေးများသည်ဖိတ်စင်ခြင်းမရှိဘဲခွက်များသောက်ရန်သင်ယူရန်ဆီလီကွန်ကောက်ရိုးကိုအလွယ်တကူကိုင်နိုင်သည်။
လုံခြုံသောပစ္စည်း၊ ကလေးကောက်ရိုးခွက် တွင်အဖုံးပါ ၀ င်ပြီးနူးညံ့သောကောက်ရိုးကိုအစားအစာအဆင့်မီဆီလီကွန်၊ ၁၀၀% BPA-free၊ PVC-free၊ lead-free၊ phthalate-free၊ အနံ့မရှိသော၊ ဓာတုကင်းစင်သောနူးညံ့သော Silicone claws သင့်ကလေး၏သွားဖုံးကိုကာကွယ်ပါ။ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပါ။
စျေးကွက်ထဲတွင် Lastic ကလေးများခွက်၊ အဖုံးပါသောခွက်၏ဒီဇိုင်းသည်ဖယ်ရှားရလွယ်ကူစေပြီးမှိုကိုနှိမ်နင်းရန်သန့်ရှင်းစေသည်။
သန့်ရှင်းရလွယ်ကူပြီးသိုလှောင်ရန်လုံခြုံသောကလေးသင်ယူခွက်သည်မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုနှင့်ရေခဲသေတ္တာများတွင်သုံးရန်သင့်တော်ပြီးပန်းကန်ဆေးစက် (သို့) လက်ဖြင့်အလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်ပါသည်။
အဖုံးပါ ၀ င်သောသရေစာခွက် သည်နူးညံ့သောဖွင့်ထားသောဒီဇိုင်းဖြင့်ကလေးအားအစာယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အရောင်နှစ်လက်ဖြင့် BPA Free Baby Sippy Cup
မင်းရဲ့ oder အရ
၁။ အစားအစာအဆင့်-bisphenol A မပါဘဲသင်ယူနိုင်သောခွက်၊ အဆိပ်မရှိ၊ အနံ့မရှိ။
၃။ နို့တိုက်ခွက် သည်အလွန်သန်မာသည်။ ပုံပျက်မသွားဘူး။ သေးငယ်သည့်လက်များအတွက်သင့်တော်သော Ergonomic ဒီဇိုင်း၊
၆ လအရွယ်ကလေးငယ်အစားအစာကိုကျွေးမွေးသည် l Melikey
အစားအစာအဆင့်၊ အဆိပ်မရှိ၊ BPA အခမဲ့ကလေးအစားအစာ l Melikey
ယခင်: ၂၀၂၁ အရည်အသွေးကောင်းတရုတ် BPA အခမဲ့ကလေးသယ်ဆောင်နိုင်သောအစားအစာသိုလှောင်ခွက်
နောက်တစ်ခု: China Teething Silicone Beads Baby အတွက်အခမဲ့နမူနာ
Socub toddler sippy ခွက်များကိုအစားအစာအဆင့်မီဆီလီကွန်၊ BPA free၊ ခဲမပါသောတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
Q2: သူ့မှာလေ ၀ င်ပေါက်ရှိပါသလား။
Q3: ဤထုတ်ကုန်သည်ကောက်ရိုးများ (သို့) ခွက်၏ဘေးဘက်တွင်ကလေးများဝါးနေသည့်အကိုက်အမှတ်အသားများကိုပြသသလား။
ဒါဟာလုံခြုံပါတယ်။ ပုတီးနှင့် teethers လုံးဝ Non-အဆိပ်သင့်, အစားအစာတန်း BPA အခမဲ့ဆီလီကွန်အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်၏ လုပ်. , FDA က, AS / NZS ISO8124, LFGB, CPSIA, CPSC, PRO 65 ကအတည်ပြုကြသည်, EN71, EU1935 / 2004 ကျနော်တို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုထား ပထမဦးဆုံးအရာအရပျ။
ကောင်းပြီဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ကလေးရဲ့အမြင်အာရုံမော်တာများနှင့်အာရုံခံကျွမ်းကျင်မှုလှုံ့ဆော်ဖို့ဒီဇိုင်း။ ကလေး vibrantly ရောင်စုံပုံစံမျိုးစုံ-အရသာအထိရွေးကြောင့်-အားလုံးခံစားရသည့်အနေဖြင့်ကစားမှတဆင့်လက်-to-ပါးစပ်ညှိနှိုင်းတိုးမြှင့်။ Teethers Excellent ကသင်တန်းကစားစရာဖြစ်ကြသည်။ ရှေ့အလယ်တန်းနှင့်အပြန်အံသွားဘို့အထိရောက်သော။ multi-အရောင်များကိုအကောင်းဆုံးကလေးလက်ဆောင်များနှင့်မွေးကင်းစကလေးကစားစရာအရုပ်၏ဤတစျခုပါစေ။ Teether ဆီလီကွန်၏တဦးတည်းအစိုင်အခဲအပိုင်းအစ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သုည chocking အန္တရာယ်။ အလွယ်တကူဆပ်ပြာနှင့်ရေနှင့်အတူမစိုက်ကလေးမြန်ဆန်လွယ်ကူသော access ကိုပူဇော်ရန် pacifier ကလစ်ဖို့ပူးတွဲဒါပေမဲ့သူတို့ Teethers လဲလျှင်, သန့်ရှင်း။
မူပိုင်ခွင့်များအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရမီဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကဒီဇိုင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်များအတွက်လျှောက်ထားနေကြပါတယ် ဒါကြောင့်သင်တို့သည်နောက်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားမှုသူတို့နှင့်အတူရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
စက်ရုံလက်ကား။ ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူများမှာတရုတ်နိုင်ငံ, ပြည့်စုံစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ဤကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်အတွက်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီပေးသည်။
စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှု။ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းလိုဂို, အထုပ်, အရောင်ကြိုဆိုကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုံးစံတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့် prodution အသင်းရှိသည်။ ထိုအကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဥရောပ, မြောက်အမေရိကနှင့် Autralia အတွက်လူကြိုက်များကြသည်။ သူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပိုပိုပြီးဖောက်သည်များကအတည်ပြုကြသည်။
Melikey ကသူတို့ကိုငါတို့နှင့်အတူရောင်စုံတစ်သက်တာပျော်မွေ့ကူညီဖို့, ငါတို့သားသမီးတို့အဘို့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုစေချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့သောယုံကြည်ချက်အပေါ်သစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယုံကြည်သည်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်အသရေပဲ!
Huizhou Melikey Silicon ကုန်ပစ္စည်း Co. , Ltd မှဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စသည်တို့ကို houseware, မီးဖိုချောင်သုံး, ကလေးကစားစရာအရုပ်, ပြင်ပ, အလှအပအတွက်ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်
2016 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်, ဒီကုမ္ပဏီခင်မှာကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့် OEM စီမံကိန်းများအတွက်ဆီလီကွန်မှိုကိုပြု၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ပစ္စည်းကို 100% BPA အခမဲ့အစားအသောက်တန်းဆီလီကွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ totallynon-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပြီး, FDA က / SGS / LFGB / စီအီးကအတည်ပြု။ ဒါဟာလွယ်လွယ်ကူကူပျော့ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ရေနှင့်အတူသန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ်ကြပေမယ့်ကျနော်တို့ဆီလီကွန်မှိုအောင်ကျော် 10 နှစ် '' အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်နှင့်ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ 2019 အချိန်အထိကျနော်တို့3ရောင်းအားအသင်း, အသေးစားဆီလီကွန်စက်၏5စုံနှင့်ကြီးမားသောဆီလီကွန်စက်၏6အစုံမှတိုးချဲ့ပါပြီ။
ကျနော်တို့ဆီလီကွန်ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်မားသောအာရုံကိုပေးဆောင်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမတိုင်မီ QC ဌာနတို့က3ကြိမ်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းရပါလိမ့်မယ်။
ထုံးစံအမိန့်များနှင့်အရောင်ကြိုဆိုကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်စသည်တို့ကိုဆီလီကွန်ကလေး teether, ဆီလီကွန် pacifier ကိုင်ဆောင်သူ, ဆီလီကွန်အံသွားပုတီး, ဆီလီကွန် teething လည်ဆွဲထုတ်လုပ် 10 နှစ်ကျော် '' အတွေ့အကြုံရှိသည်
တရုတ် Baby Cup
ဆီလီကွန် teether , အစားအသောက်တန်းဆီလီကွန်ပုတီးအမြောက်အများ, သဘာဝအသွားများ, ဆီလီကွန်အံသွားပုတီး , ဆီလီကွန်ကလေး teether ,4လအရွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး teether ,